Tu Tu Tha: နင်လားဟဲ့ ရှိုင်းဟုတ် .. ငါလားဟဲ့ တူးတူးသာ
Tuesday, March 24, 2009 | Labels: ဖြတ်သန်းမှုစာစု |
This entry was posted on Tuesday, March 24, 2009 and is filed under ဖြတ်သန်းမှုစာစု . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ပုလဲ ဆိုတဲ့ network marketing တော့ သေချာကြုံဖူးရဲ့။
ရှိုင်းဟုတ် လင်ဇီးလဲ ကြားဖူးတာ ကြာပါပြီ :D
စာနယ်ဇင်းသမား အင်တာဗျူဝါ ပါး ၀တယ်ဆိုတာ အဖြတ်အတောတ် အရှောင်အသိမ်း ကောင်းတာကို ဆိုလိုတာကိုး...
:D အတွေ့အကြုံလေး ဖတ်သားသွားပါတယ်
အမ မှတ်သားစရာပါပဲ အင်တာဗျုးမယ့်လူ marketing အဆင်းခံလိုက်ရတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ အရှောင်အတိမ်းကျွမ်းပေလို့..
လင်ဇီးနဲ့မမိပေမယ့် သီချင်း (၃ )ပုဒ် ဆုံးသွားတာကိုး.. အိ
ဒီနေ့ နေ့လယ်က မဆုမွန် က သူ့ဂျီတော့ခ် ရဲ့ မက်စေ့ခ်ျ မှာ အမ ရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ စာလေး တပိုင်းတစ ကိုတင်ထားပါတယ်
အဲဒါလေးကို ကျတော် က မြင်ပြီးသကာလ
ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ နဲ့ ကောက်ပြီးလက်တန်းလေး ဒီလိုဆက်စပ်ထားပါတယ်
အစကတော့ ဦးမွန် (မဆုမွန် ကိုကျတော်ခေါ်တာပါ) ရေးတာထင်လို့ပါ
ပြီးတော့ ဆက်စပ်ပြီးမှ ဦးမွန်က မဟုတ်ဘူးအမ ရေးထားတာ လို့ပြောပြပါတယ်
အဲဒါလေး ကျတော် ပေ့ဂ်ျ မှာတင်ချင်တာ အမ ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လိုချင်လို့ပါ
ကဗျာ က ဒွေးချိုးလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်သွားပါတယ်
အမ သဘောမတူရင်တော့ မတင်ပါဘူးခင်ဗျာ...
အခုမှဖတ်လိုက်မိလို့ အမရေ ..
ကျမရဲ့ အမေလည်း အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးလေကြောမှာ မျောခဲ့ရဖူးတယ်။
ဒေါ် - ပြုံး မဟုတ်လား။ :)
သူက အိမ်တိုင်ယာရောက်ကို လာပြောတာ။ အမေကတော့ အားနာလို့ သူ့ဆီက လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်တွေ ၀ယ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ သိပ်တောင် မသောက်ဖြစ်ဘူး။ မှိုတက်သွားလို့။
မြန်မာပြည်မှာ ရှိုင်းဟုတ် ပေါက်သွားတာ
အလုပ်လက်မဲ့တွေများတော့ အဲဒါကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ် ထင်ပါတယ်
စည်းရုံးရေးကတော့တကယ်ကောင်း အဟောကောင်း အပြောကောင်း ရောဂါအတွက် ကောင်းမကောင်း မသိ
အစည်းအဝေးတခုခုဆိုရင် ညောင် နှစ်ပင်ထက်တောင်ပို သေး မန်းမှာဆို ရှယ်ဆောက်ထားတာ ရောက်ရင် ၀င်ကြည့်ပါအုံး